Qabyo-Qoraalka Dastuurka (Nuqulkii koowaad 2010)
(a) Si sharciga waafaqsan loo caddeeyey dhimirkiisu inuusan dhammayn;
(b) Si sharciga waafaqsan loo caddeeyey in uu musallif yahay;
(c) Lagu helo dembi la xiriira doorashooyinka 10kii sano ee ugu dambaysey gudaheeda;
(d) Lagu helo dembi ku lug leh musuqmaasuq iyo ku-tagrifalid awood xafiis ciqaabteedu ay ka badan tahay 5 sano, Kaddib marka la dhaqan-geliyo Dastuurkan; ama
(e) Xabsi uu ku jiro.
a) Istiqaalo keeno;
b) Xubinnimada ku waayo sida ku xusan qodobka kore; ama
c) Loo doorto ama loo magacaabo xafiis hawshiisu aanay la socon karin xubinnimada baarlamaanka.
a) uu ku waayo xubinimadiisa sida uu qabo aodobka 77.
b) xilka looga qaado si waafaqsan Dastuurka Dawlad-Goboleedda; ama
c) uu istiqaalo keeno.
Shaqada rayidka ee heeraraka kala duwan ee xukuumadda waa in lagu saleeyaa qiyamka dastuurka, hufnaan, wax-qarsi la’aan, u-adeegis bulsho iyo dhawrista jaranjarada maamul, anshax-wanaag, karti, howlkarnimo, mihnad sare, caddaalad, sinnaan iyo dhaqan-wanaag.
(3) Xukuumada federaalku sharci ayay ugu oggolaanaysaa xukuumadaha dawlad- goboleedyada iyo dawladaha hoose in ay uruuriyaan canshuuro ama dakhli kale sida uu qabo sharcigaan, laakiin waa in Dawladda Federaalku u celisaa dawlad-goboleedyada kharajka uga baxay ururinta dakhligaas.
(g) baahida dawladaha in ay yeeshaan saadaal heer dakhli, si ay u qorshaystaan barnaamijyadooda;
(4) Guddiga maaliyaddu waa inuu markasta dib-u-eegis kusameeyo nidaamka dakhlqaybinta, isla markaasna uu u soo jeediyo Dawladda federaalka talooyin lagu qaybinayo dakhliga muddo shan sano ah markiiba. Sidoo kale, wuxuu qabanayaa hawlaha uu u xilsaaro sharcigu.